ပညာရပ်အသစ်တွေကို ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဘယ်လိုသင်ယူကြမလဲ ? | Active IT
ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခုခေတ်ကြီးကို ပညာရှင်တွေက ပညာခေတ်ရယ်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်.. လက်နက် နိုင်ငံခေတ်၊ ငွေဝယ်ကျွန်ခေတ်၊ အရင်းရှင်ခေတ်၊ ဘာခေတ်၊ ညာခေတ် စတာတွေကို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီး တခြားအရာတွေထက် ပညာက ပိုအရေးပါ အရာရောက်တဲ့ ခေတ်ကို ရောက်လာပြီလို့ ဆိုလိုချင်တာပါပဲ..
အဲ့လိုခေတ်ကြီးမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို လေ့လာ သင်ယူကြတယ်ပေါ့ .. အဲ့မှာ တချို့တွေလည်း ကိုယ်သင်ယူတဲ့ ပညာရပ်ကို အခက်အခဲမရှိသင်ယူနိုင်ပေမဲ့ တချို့ကြတော့လည်း ခုသင်လိုက် တော်ကြာနေ မေ့လိုက် ဖြစ်ပြီး တိုးတက်သင့်သလောက် မတိုးတက်တာတွေရှိတယ်..
အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက် ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ ပညာရပ်ကို ဘယ်လိုပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် လေ့လာသင်ယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Feynman Technique ကို ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ တက်နိုင်သလောက်ရှင်းပြသွားပါမယ်…
Feynman Technique အ‌ကြောင်းကို မပြောခင် နည်းနည်းစိမ်းနေမှာစိုးလို့ အရင်ဆုံး Dr Feynman နဲ့ နည်းနည်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်..‌‌ဒေါက်တာ ဖိုင်း(န)မန်း ဟာ ကွမ်တမ် ရူပဗေဒနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ နိုဘယ်ဆုရထားတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ နာမည်ပြောင်ကတော့ “The Great Explainer” ပါတဲ့.
ဘာကြောင့် ဒီနာမည်ပြောင်ကို သူရသလဲဆိုတော့ သူဟာထူးချွန်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ယုံတင်မက ကျောင်းသားတွေကို စာသင်တဲ့အခါမှာလည်း နားလည်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အလွယ်တကူ နားလည်အောင် ရှင်းပြနိုင်တဲ့ ‌ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါတဲ့ …
‌ပညာရပ်တစ်ခုကို လေ့လာရာမှာ သေချာသဘောပေါက်ပြီး ခဏခဏ ပြန်လေ့လာမနေရအောင် သုံးတဲ့ ဒေါက်တာ ဖိုင်း(န)မန်းရဲ့ နည်းလမ်းကတော့ အဆင့်လေးဆင့်ရှိပြီး အခြေခံအားဖြင့် အိုင်းစတိုင်း ပြောခဲ့တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ “အကြောင်းအရာတစ်ခုကို လွယ်ကူ ရိုးရှင်းစွာ ရှင်းမပြတက်ဘူးဆိုရင် အဲ့အ‌ကြောင်းအရာကို မင်း သေချာနားမလည်ဘူး” ဆိုတဲ့ စကားပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်..
ပထမဆုံး အဆင်ကတော့ စာကျက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုကိုလေ့လာတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ့လာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်လေ့လာထားတဲ့ အ‌ကြောင်းအရာရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို စာရွက်ပေါ်ချရေးပါတဲ့ (ကွန်ပျူတာထဲရိုက်တာ ပါးစပ်ကအလွတ်ရွတ်တာတွေထက်စာရင် စာရွက်ပေါ်ချရေးတာက ပိုပြီးမှတ်မိစေတယ် လို့ သုတေသနတွေအရ သိရပါတယ်)
ဒုတိယတစ်ဆင့်ကတော့ ကိုယ်လေ့လာထားတဲ့ အ‌ကြောင်းအရာကို သူများကို ရှင်းပြရမယ့် ပုံစံနဲ့ ချရေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်.. အလွတ်ကျက်ပြီး ရေးခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး .. တစ်ခါတလေ ကိုယ်နားလည်ပြီးသားလို့ ထင်နေတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ သူများကို ရှင်းပြရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာမှ ကိုယ်သေချာမသိဘူးဆိုတာ ပေါ်လာတက် ပါတယ်(အထူးသဖြင့် ကလေးတွေနဲ့ဆိုပိုသိသာပါတယ်) .. ဒါ‌ကြောင့် ကိုယ်နားလည်ပြီးသားလို့ ထင်တဲ့ ကိစ္စကို သူများကိုရှင်းပြမယ့် ပုံစံနဲ့ ချရေးတာက ကိုယ်တကယ်နားလည်မလည် ကို သေချာစေပါတယ်..
တတိယအဆင့်ကတော့ ဒုတိယအဆင့်ချရေးတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ကောင်းကောင်းနားမလည်တာ၊ မေ့သလိုလိုဖြစ်နေတာ စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်လေ့လာဖို့ပါ.. ပြန်လေ့လာပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဒုတိယအဆင့်မှာ ရှိနေတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ထပ်ဖြည့်ရေးသင့်ပါတယ်… အဆင်နှစ်နဲ့ သုံးဟာ စိတ်တိုင်းမကျမချင်း အထပ်ထပ် အခါအခါလုပ်ရမှာပါ..
နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ ဒုတိယအဆင့်မှာကိုယ်ရေးထားတဲ့ဟာတွေကို ပိုပြီးလူနားလည်လွယ် အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားဖို့ပါ.. တက်နိုင်သမျှ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားလုံးတွေကို ရှောင်ပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် ကလေးတစ်ယောက် နားလည်နိုင်လောက်တဲ့ အထိရှင်းလင်းအောင် ရေးဖို့ပါ.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလေးတွေဟာ လူကြီးတွေထက် အများကြီး အမေးအမြန်းထူပါတယ်.. လူကြီးတစ်ယောက်ကို ဒါကတော့ ဘယ် သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ ဘယ်သီအိုရီက ထွက်လာတဲ့ ညီမျှခြင်းပဲလို့ ပြောလိုက်ရင် အများစု ပြန်လှန်မေးတာမျိုး မလုပ်ပေမဲ့ ကလေးတွေကတော့ မရပါဘူး .. အဲ့ဒါကြီးက ဘာလို့ အဲ့လိုလုပ်တာလဲ ဆိုတာလိုမျိုးကို တန်းခနဲ မေးပါလိမ့်မယ်.. ဒါ‌ကြောင့် အဲ့အဆင့်အထိ ပြင်ဆင်ထားတာက ပညာရပ်တစ်ခုပေါ်မှာ ပိုပြီး သေသေချာချာ နားလည်စေပါတယ်…
ဥပမာတစ်ခုပေးရရင် အရွယ်ရောက်ပြီး လူအများစုဟာ တြိဂံတစ်ခုရဲ့ အတွင်းထောင့် အားလုံးပေါင်းခြင်းဟာ ၁၈၀ ဒီဂရီရှိတယ်ဆိုတာကို သိပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေဟာ ဘာ‌ကြောင့် အဲ့လိုဖြစ်ရတယ် ဆိုတာ ရှင်းမပြတက်ပါဘူး … အဲ့ဒါက ကျွန်တော်တို့မှာ သိတယ်လို့သာထင်နေပြီး တကယ်တမ်း နားမလည်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ..
တချို့ကလည်း တစ်ခုခုလေ့လာပြီးတိုင်းသာ ဒီလိုလုပ်နေရရင် သေချာနားလည်လာမှာကတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ လေ့လာရာမှာ ပိုမမြန်ဘဲ အချိန်တွေပိုကုန်မလားလို့ တွေးကောင်းတွေးမိနိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပညာရပ်တစ်ခုခုကို လေ့လာလို့ အချိန်ကုန်တာတွေကို သေချာချိန်ကြည့်ရင် တစ်ခုခုကို သေချာနားလည်အောင် အားထုတ်လို့ ကုန်တဲ့ အချိန်ထက် သေချာနားမလည်ဘဲ ပြီးပြီးရောလုပ်ခဲ့လို့ အရေးအကြောင်းဆို စာအုပ်တွေ ပြန်ပြန်လှန် နေရတာကြောင့် ကုန်တဲ့ အချိန်ကပိုပါတယ်..
ဒါကြောင့် တစ်ခုခုဆို သင်လိုက် မေ့လိုက် ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေအနေနဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုလောက်ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်စပြီး စမ်းကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်.. အဆင်မပြေဘူး ကိုယ်နဲ့ မကိုက်ဘူးထင်တော့လည်း မသုံးနဲ့ ပေါ့ဗျာ.. ကျောင်းဆရာ အဖြစ်လည်း အသက်မွေးတဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ သေချာလေ့လာရမယ့် ကိစ္စတွေကို Feynman Technique သုံးပြီးပဲလေ့လာသလို တကယ်လည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်.. တစ်ခါထဲနဲ့ သေချာ နားလည်သွားတဲ့နောက်မှာ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ကြည့်နေရတဲ့ ဒုက္ခကြောင့် အချိန်မကုန်တော့ဘဲ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ တခြား ပညာရပ်တွေကို ပိုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လေ့လာနိုင်ပါတယ်..